Incwadi Evulekile eya ku- @ Jack Mayelana ne-Twitter | Martech Zone
Incwadi Evulekile eya ku- @ Jack Mayelana ne-Twitter
ULwesihlanu, February 10, 2017 NgeSonto, ngoFebhuwari 12, 2017 Douglas Karr
Sekungunyaka manje, ngincokola ukuthi iTwitter ifana nentombazane ebengithandana nayo esikoleni ebinganginiki isikhathi sosuku. Ngesinye isikhathi sasidlala sijikeleza ibhodlela egumbini elingaphansi, wabe esedonsa ibhodlela ukuze aqabule umfana owayeseduze kwami ​​owayeyindlala. Wayephula inhliziyo yami. Futhi wagcina ephule eyakhe. Sobabili sahlulwa. I-Twitter iyalahleka, nayo.
Ubhale ku ikholi yakho yokuhola:
Kuyasijabulisa ukubika ukuthi ukusetshenziswa kwansuku zonke okusebenzayo kuyashesha kwikota yesi-3 ilandelana, futhi siyabona ukuthi ukukhula okuqinile kuyaqhubeka.
Angiqiniseki ukuthi ubani We kunjalo, kepha lapho ngizwa igama ukusetshenziswa okusebenzayo kwansuku zonke kuyashesha, Ngacweba izinyembezi. Uyaqabula umdondoshiya. Futhi kuyabheda ngoba yimi ebengikuthanda.
Awuhambi usuku ungakezwanga nge-Twitter.
Yize lokho kuyiqiniso, masithembeke komunye nomunye. Lokho kungenxa yokuthi igama tweeted kwandulelwe igama Donald Trump isikhathi esingaphezu konyaka manje.
Lowo mfana ongenandaba naye kakhulu ukuphela kwesizathu esenza iningi labantu lizwe ngeTwitter nonyaka odlule. Futhi kubonakala kuzoqhubeka kulo nyaka. Akunaso isipho esizoletha i-Twitter enkazimulweni yayo yangaphambilini.
Bengisebenza embonini eku-inthanethi kusukela yaqala nokukhangisa kwendabuko ngaphambi kwalokho. Ngibuke ngesikhathi amaphephandaba ezibulala, engalinaki ithalente lobuntatheli abafundi abalazisa futhi belithengisa ngamehlo kanye namakhuphoni. Bathandana nomjikijelwa.
Ngenze uphenyo ngokuzimisela futhi nganikeza ukubonisana kwe-SaaS ngaphezulu kwezingu- $ 3 billion ekutshalweni nasekutholakaleni. Ngabikezela (njengoba kwenza abanye abaningi) ukuphela kohlangothi olimpunga lwemboni yokusesha. Ngangiyingxenye yokuqala yokukhula kwe-ExactTarget futhi ngasiza ukuqala enye inkampani eyayithengisela i-Oracle. Ngibhala nge-Marketing Technology nsuku zonke. Ngiyazungeza.
Futhi ngiyayithanda iTwitter… yize ayengangilaleli.
Ngikholelwa Kanjani ukuthi i-Twitter Ingaphenduka… Ngokushesha
Ake siqonde ngqo ephuzwini. Ngikhungathekile ku-Twitter ngoba ngicabanga ukuthi inkinga incane kakhulu kunalokho oyikho. Futhi ngoba ngikholwa ukuthi uthandane nezinombolo ezikhulayo - i-jerk - okuholela ekuzibulaleni kwakho.
Okuhlangenwe nakho kwe-Twitter bekuvame ukutholakala okungakholeki komuntu omangalisayo, uhlobo lomkhiqizo, noma ubuhlakani obufakwe kuzinhlamvu eziyi-140. Okuhlangenwe nakho manje kufana nokuzama ukuba nengxoxo ku- umgodi omkhulu we-mosh emhlabeni. (Bengihlala ngifuna ukusebenzisa igama elithi mosh pit ku-athikili).
Umsindo ku-Twitter awupheli… futhi ubungaza lokho kwanda ukusetshenziswa okusebenzayo.
Nakhu engingakutusa ngokushesha:
Vimba amaTweets aphindaphindiwe. Misa ukuhlanya. Ku-akhawunti yami ye-Twitter, akufanele ngivunyelwe ukuphinda i-tweet efanayo isikhathi esithile ngaphandle kokuthi ngikhokha ukukhuthaza i-Tweet. Kungani ngingakukhokhela uma ngikwazi nje ukuqhuma i-echo usuku nosuku? Icebiso: Angikukhokhi.
Shaja i API ukusetshenziswa nge-tweet eshicilelwe ngayinye. Akudingeki ukuthi kube kuningi… kepha njengomshicileli, ngingajabula ukukhokha ukubhaliswa kwanyanga zonke lapho ngikwazi khona ukuthumela izexwayiso ze-tweet mayelana nezindatshana zami ukuze abalandeli bami baphendule. Ogaxekile ngeke. Bazohamba.
Shaja ukusetshenziswa kwe- # ad nge-tweet eshicilelwe ngayinye. Izigidi zamadola zigeleza kupulatifomu yakho nsuku zonke ongazenzi imali. Impela, abangani bami bazongizonda ngokusikisela lokhu, kepha ngizama ukukusiza - hhayi bona. Izokwehlisa ukucela, futhi singakwazi ukuvimba noma ukukhahlela abagaxekile abacela ngaphandle kokumaka.
Engeza Khetha Ukungena Ngemilayezo Eqondile. Angikwazi futhi ngeke ngihlole ama-DM ami njengoba engasalawuleki. Angazi ukuthi ngingaqala ngaphi kodwa bengizolithanda ithuba lokuvumela abanye abasebenzisi ukuthi bakhulume nami ngasese. Njengamanje zixubene nezinye izinkulungwane zeminye imiyalezo futhi ngiyenqaba ukuzihlola.
Yeka ukungithumelela ama-imeyili ukuze ngilandele I-Pop Culture Ama-akhawunti we-Twitter angabalulekile nakancane kimi. Ukube ubungilalela (isb. Ububuka ukuthi ngixhumana nobani), ubuzokwazi ukuthi uKanye West noJustin Bieber ngabantu enginentshisekelo enkulu kubo. Ngenkathi uzibheka njenge-TMZ ethile yezenhlalo, akusikho ukuthi ngikusebenzisa… futhi hhayi ukuthi ezinye izigidi zikusebenzisa kanjani.
Behlukanisa Imikhiqizo Evela Kubantu. Akudingeki ukuthi kube khona umehluko omkhulu, kepha kungamangaza uma ngingawubona umehluko. Ngingahlunga futhi ngihlukanise okuphakelayo kwami ​​phakathi kwezingxoxo zomuntu siqu nezomsebenzi.
Yamukela ukuba ngu- Isiteshi Senkonzo Yamakhasimende. Izigidi zezikhalazo nezibuyekezo zidlula kupulatifomu yakho nsuku zonke bese ziya ezinkampanini ezithenga amathuluzi wokuqapha ezokuxhumana nabantu ukuze zizithathe. Kungani unganikeli ngamathuluzi walokhu? Kungani i-Twitter ingakhiphi ukhaphethi kuzinhlelo zokusebenza zenkampani yangaphandle futhi uzenzele wena? Ngingathanda i-bot bot esizeni sami engangimaka futhi ishicilele ku-Twitter ukuze izwe libone. Ngingathanda ukukubona uhlinzeka ngemizwa nezibuyekezo ngokuzenzakalela njengengxenye yephrofayili yomkhiqizo.
Sicela ulungise eyakho usesho lwangaphakathi futhi ngokuzenzakalelayo ukunemba. Lokho okufanele ngikusebenzise isayithi: twitter.com ukusesha ku-Google ukuthola abantu ku-Twitter kuyahlekisa.
Lapho unayo, Jack. Ngiyathemba ngobuqotho ukuthi i-Twitter ngeke inamathele kuleso siga esiqhubeka siqabulana emaphathini. Khahlela ukusetshenziswa kwe-jerk futhi wamukele ukuzibandakanya. Uthando lwangempela lwe-Twitter luhleli lapha lilindile.
Psst… Ngishayele ucingo. 😉
Tags: Donald icilongoJackdorsey jacktrumpicilongo ku-twitterTweetTwitter
Umthelela Wezikhathi Ezincane Ohambweni Lomthengi
I-Google Search Console Goofed Futhi Ithunyelwe Izaziso Zamanga ku-WordPress